Ngonongonona Ao Afganistana: Fanabeazana, Mozika, Natiora Mahafinaritra Ary Fahalalahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Aogositra 2017 13:12 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, বাংলা, Ελληνικά, English
Miresaka [En] ny toe-javatra mampalahelo mikasika ny rafi-pampianarana ao Afganistana i Sun Leaf eo amin'ny blaoginy. Manoratra ilay blaogera fa:
Nandefa lahatsoratra iray koa i Sun Leaf mikasika ilay afgana mpihira malaza, izay araka ny lazain'ilay blaogera, dia io no Cat Stevens an'i Afganistana (Yusuf Islam). Manoratra ilay blaogera fa: “Na hainao na tsia ireo tononkira, ny hira (lahatsary) ihany dia tsy maintsy hitondra anao ho any amin'ireo firenena lavitra”.
Mitantara ny diany tany afovoan'ny natiora mahafinaritra tao Bamyan i Onne Parl [En], nefa mampatsiahy amintsika ihany koa ireo loza. Rehefa miresaka fitsangatsanganana amin'ireo mponina afgana, ny fanontaniana voalohany apetrak'izy ireo dia ny hoe: “Efa tany Band-e-Amir ve ianareo?”. Ireo farihy malaza ao afovoan'ireo tendrombohitra Koha-e-Baba dia iray amin'ireo toerana fizahantany tsy fahita firy ao Afganistana. Afgana an'arivony no mitondra ny fianakavian'izy ireo amin'ny fiara ary mandeha lavitra mankany amin'ireo farihy, lalana efa ho iray andro sy tapany avy ao Kaboul. Ny toerana koa fanampin'izany rakotra ireo vanja milevina. Telo taona lasa izao, fiara fitaterana iray no nisavoana raha nandalo teny akaikin'ilay làlana lehibe mankany. Telo ambiny folo no olona maty teo noho eo.
Free Keyboard [Farsi], blaogera iraniana iray, mitantara ny diany tany Afganistana. Mampitaha ny fahalalahana maneho hevitra ao Iràna sy ao Afganistana izy. Mifanohitra amin'ireo lalàna silamo (ao Iràna ), tsy dia mametraka fepetra loatra i Afganistàna Islamika amin'ireo gazety, gazetiboky, ho an'ny aterineto sy ny boky. Azonao alefa avokoa izay tianao rehetra. Malalaka ianao amin'ny fanokafana tranonkala ary azonao apetraka ao avokoa izay tianao rehetra. Toy ny any amin'ny firenena iray mandroso. Nampiany anefa avy eo fa mampihorohoro ny fiainanao ireo mahery fihetsika mpanao an-tendrony.